UZweli Mkhize – Udokotela okhulume ngqo nabantu | Scrolla Izindaba
UZweli Mkhize – Udokotela okhulume ngqo nabantu
UDokotela uZweli Mkhize ube yisambulo kulo nyaka; umholi weqiniso futhi onekhono oqhamuka ku-ANC okhipha bonke abangawenzi umsebenzi, abakhohlakele nabangenasimilo.
Kulezinsuku abantu abafana noAce Magashule noJacob Zuma bayabusa ezikhundleni zobuholi eqenjini.
Ngakho-ke kwaba isimanga esamukelekile esizweni ngesikhathi uMengameli uCyril Ramaphosa ememezela ukuthi uNgqongqoshe Wezempilo uzohola futhi aqondise ukuqaliswa kwecebo lezwe lokuphendula ubhubhane lwe-Covid-19.
Imiyalezo kaMkhize ezweni ibilula ngokwanele kubantu abaningi abangafundile kodwa nokho ibe yinhle ngokwanele ukuba ibe yikhaya labanye ochwepheshe nabacwaningi bezempilo abahamba phambili emhlabeni.
Ngokungafani nosopolitiki banamuhla be-ANC, uMkhize ubethembekile ngobungozi esibhekene nabo, nobuthakathaka kanye namandla ecebo lethu.
Okubaluleke kakhulu ukuthi uwine umphakathi ngesicelo sakhe sokuthi wonke umuntu aqinisekise inhlanzeko nasezindaweni ezingakaze zibe namanzi ahlanzekile.
Ukuphatha ubhubhane lwezempilo kuye kwaba yindlela yakhe yokuphepha eminyakeni engamashumi amabili edlule esebenze ne-World Health Organisation ekulweni nokuqhamuka kwesifo sikamalaleveva esifundeni sase-Lebombo kwathi kamuva kwaqubuka ikholera eNyakatho naKwaZulu-Natali ekuqaleni kweminyaka yama-200.
Kuze kube manje bangaphezu kwezigidi ezingama-24 000 abantu asebelahlekelwe yizimpilo zabo ngenxa ye-Covid eNingizimu Afrika – kodwa bekungaba kubi kakhulu.